Otu esi etinye ma ọ bụ mee ka Cockpit rụọ ọrụ na AlmaLinux 8 - LinuxCapable
October 18, 2021 October 16, 2021 by Jọshụa James
N'ime nkuzi na-esote, ị ga-amụta ka esi etinye Cockpit na sistemụ AlmaLinux 8 gị.
Dị ka n'elu, nakwa n'etiti ihuenyo, ị nwere ike nyochaa ebe nchekwa na CPU ojiji na-ahụ zuru ezu akụkọ ihe mere eme. Otu uru dị na iji Cockpit bụ inwe ihuenyo ọnụ na UI Weebụ. N'okpuru ibe ahụ, pịa ọnụ.
Na nkuzi, ị mụtala otu esi etinye ma ọ bụ mee ka Cockpit maka AlmaLinux 8. N'ozuzu, Cockpit bụ nhọrọ magburu onwe ya maka ndị ọrụ iji nọgide na-arụ ọrụ ha ngwa ngwa. Emebere ya maka ndị ọrụ ọhụrụ nwere sysadmins n'uche yana ikike ijikwa ya na anya. Ọ bụrụ na ị na-abanye na Linux, iji Cockpit ga-abụ nhọrọ siri ike n'ịghọta ka sistemu si arụ ọrụ na ịchọpụta okwu ngwa ngwa n'ime ọpịpị ole na ole.
Categories AlmaLinux Tags AlmaLinux, Cockpit Mail igodo